Isinxibelelanisi seTshaja ye-EV, itshaja ephathekayo ye-EV, i-DC ekhawulezayo kwitshaja- iMida
Sisebenzisana nazo zonke iiPlagi zeNqwelo zeZithuthi
Yiza namava okuhlawula aphezulu kulo naliphi na ikhaya lomqhubi we-EV. Isisombululo sokutshaja ekhaya siquka ukufakela kunye nokusebenza kwendawo yokutshaja eyi-smart kwaye sinika ukufikelela kwiphakheji epheleleyo yeenkonzo zokutshaja smart.
Nika abasebenzi kunye neendwendwe izisombululo zokutshaja ngokulula. Ngokudityaniswa kokuqonda kwedatha, amanqaku olawulo kunye neenkonzo ezibanzi, uya kuqinisekiswa ukutshaja kwindawo yakho yeshishini efanelekileyo kunye nokungakhathali.
Vumela abaqhubi bakho bonwabele amava okutshaja angenamthungo naphina apho baya khona. Ngokufikelela kwiindawo ezingaphezu kwe-2,000 zoluntu kubandakanya amanqaku angaphezu kwama-800 akhawulezayo e-UK, ikhadi lokutshaja likaNewMotion kunye nokunikezelwa kweapp. Isikhululo seshaja seQela le-MIDA
Wamkelekile kwiqela MIDA
I-Shanghai Mida EV Power Co., Ltd. ngumvelisi ophakamileyo wobuchwephesha bezixhobo zokutshaja izithuthi zombane, Njengomvelisi we-EVSE oqeqeshiweyo, iqela le-MIDA lijolise ekunikezeleni abathengi ngezixhobo zokutshaja ngobuchule ezikhuselekileyo, ezifanelekileyo ngakumbi nezizinzileyo. Iimveliso ze-MIDA ze-EV zijolise kwimakethi yasekhaya kunye neyorhwebo kwicandelo lokutshaja i-EV. Kubandakanya zonke iintlobo ze-EV Isinxibelelanisi kunye ne-EV Tshaja Socket, iiEV zokutshaja iiVenkile, itshaja ye-EV ephathekayo, iAdapter ye-EV, CCS Combo 2 Isinxibelelanisi kunye neendawo zokungena, CCS Combo 1 Isinxibelelanisi , Iplagi ye-CHAdeMO, Isikhululo sokutshaja se-EV esonyulwe ngodonga, Isitishi se-DC seshaja, i-EV Charger Moudle kunye ne-EV eyongezwayo. Zonke iiMveliso zethu zifumana i-CE, TUV kunye nesatifikethi se-UL. Iqela le-MIDA linobutyebi bamava oshishino, amaxabiso okusilela kubo bonke abathengi, kwaye ihlala izinikele ekwandiseni imisebenzi yemveliso kunye nokuphucula ukusebenza kwemveliso. Iinkonzo ze-OEM kunye ne-ODM ziyafumaneka. Iimveliso zethu zithandwa eYurophu, eMelika, eAsia njlnjl. Okwangoku, iQela laseMida liNika uQwalaselo kuPhuhliso lwaMashishini aMandla oMandla oMbane oMbane oMtsha. Sizimisele ukuba yiNkokeli yeShishini kunye noMvelisi.
Ifektri ye-MIDA EV
Velisa umgca 2
Ixabiso leVenkile yeChina China DC ekhawulezayo ye-EV Charger ...
400A CCS combo 2 Plug Ulwelo-zipholile Ukutshaja Gu ...
80A 125A CCS Vehicle Inlet Uhlobo 1 Socket CCS 1 ...
Isitshixo se-Electromagnetic samandla esiThuthi soMbane ...
DUOSIDA 16A 32A 3 Isigaba Uhlobo 2 Socket nge inte ...
10M 32A 40A Uhlobo 1 EV Ukutshaja Ulwandiso Cable ...
American 150A CCS2 ukuba CCS1 iadaptha Fast Charge ...
Uhlobo lwe-150A 200Amp CCS 2 Socket DC yokuKhawulezisa ngaphakathi ...
Intambo ye-EV yeshaja
Indawo yokutshaja ye-EV